Wixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu! – Kichuu
HomeNewsAfricaWixinee Labsii Magaalaa Finfinnee Wayyaaneen Qopheeffatte Wal-geenyee Haa Didnu!
Tulluu Caalii irraa
Diraamaa Wayyaneen maqaa “Labsii Naannoon Oromiyaa Dantaa Heeraan Finfinnee/Addis Ababa/irraa qabu Murteessuuf bahe jedhamee waamamuu danda’ajedhee qopheeffate keessi isaa yeroo ilaalamu maqaa isaa wajjin iyyuu wal hin fakkaatu.
Labsii Koloneeeffattooti Tigraayi irraa dhufan qopheeffatan kun wal ta’iinsa gowoomsaa Koloneffattooti Awurooppaa jaarraa 19ffaa keessa ittiin mootummoota Africa garii gowoomsaa turan (Imperialist trickery) wajjin wal fakkaata. Maqaama labsii kanaa keessaa jecha ልጠቀስ ይችላል (Waamamuu danda’a) jedhu yoo ilaalle ta’uu malaa dha malee “ Ta’a’ kan jedhu miti. Gaafa barbaadan hiika biraa itti kennuu danda’u. Jechooti labsii kana keessa jiran baayyeen isaanii gadi fageenyaan yoo ilaalaman jechoota gara barbaadaniitti hiikkachuun danda’amu dha. Dhimmooti jala sararamanii ifatti taa’an hedduu xiqqaa dha. Hedduun isaa ta’e jedhamee afaan dhoqonaa’aan barreeffame.
Hunda caalaa immoo shiraa fi adeemsa Wayyaanee kana daran kan saaxilu “labsii maqaa Dantaa Naannoon Oromiyaa heeraan qabu murteessuuf tumame’ jechaa gadi bu’anii “Jiraattota Oromoo jechuun Oromoota osoo Finfinneen hin ijaaramin duraa qabee warra lafa sana irra turan fi ammas magaala sana keessa jiraatan jechuu dha’ isa isaan jedhani dha. Oromooti waggaa 130 dura osoo magaalaan Finfinnee hin ijaaramin lafa sana irra jiraataa turan har’a magaalaa Finfinnee keessa jiraachuu mitii lubbuun iyyuu hin jiran. Ilmaan isaanii fi ilmaan ilmaan isaanii iyyuu kan Finfinnee keessatti hafee achi keessatti wal hore yoo jiraate hedduu xiqqaa dha.
Osoo ta’ees gaaffii Oromoon Finfinnee irratti qabu gaaffii namoota dhuunfaa miti. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa “Finfinneen lafa Oromiyaa ti, qabeenya ummata Oromoo ti” jedhu dha. Wayyaanoti garuu Oromoota har’a Finfinnee keessa jiraatan isaan keessa iyyuu warra akaakilii fi abaabiliin isaanii lafa sana irra turaniif tajaajila kan akka ibsaa, bishaan dhugaatiifaa isiniif galchina jedhanii qoosu. Ibsaa fi bishaan dhugaatii isaan uummata biraa irraa adda baasanii qofaatti Oromoota Finfinnee keessa jiraataniif qofaaf galchanis ibsaa fi bishaan akkamii akka ta’e namaaf hin galu. Jarri kun nu malee namni biraa waa yaaduu jedhanii waan yaadan hin fakkaatu.
Ofittummaatu ija itti jaamsee gurra itti douche. Kana malees labsiin kun Oromooti bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan mirgoota heerri biyyattii fi seerota biyyattii kan biroon kennamanitti gargaaramuuf mirga guutuu qabu jedha. Kunis waanuma nama kamiifuu katabame malee mirga addaa Oromoota Finfinnee keessa jiraataniif kenne hin qabu. Kan biraa “daangaa Oromiyaa fi Finfinnee taraaruun walii galtee bulchiinsa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa gidduutti ta’uun raawwatama”jedha. Kunis daangaa Oromiyaa waggaa 25 dura eesaa hanga eessaa akka ta’e murtaa’ee dabre faallessuuf amuumachaa akka jiran agarsiisa. Akka labsii kanaatti Oromoon naannoo Oromiyaa irraa dhaqee Finfinnee keessa jiraachuuf iyyuu wabii hin qabu.
Walumaa gala Finfinnee irratti abbaan biyyaa, kan waan barbaade irratti murteessu Wayyaanota Tigraayi irraa dhufani dha. Waan nama raaju immoo labsiin kun mirga dinagdee Oromoon Finfinnee irratti qabu ilaalchisee Qonnaan bultooti Oromoo beenyaa malee lafa isaanii irraa hin buqqa’an kan jedhu dha. Hubadhaa kun mirga dinagde Oromoon Finfenne irraa qabu ta’uu isaa ti. Galii dinagde magaalaa Finfinnee keessaa galu ilaalchisee qoodi motummaa Oromiyaa tokko iyyuu waan jedhame hin jiru. Magaalattii bulchuu ilaalchisees Caasaa qabalee ofiif akka barbaadanitti tolfachuuf labsaame irra dabree qoodi Mootummaa naannoo Oromiyaa tokko iyyuu achi keessatti hin mul’atu. Mootummaan naannoo fi Caffeen Oromiya labsii kana akka hojii irra oolchaniif dirqami itti kenname malee gaafatama siyaasaa fi dinagdee tokko iyyuu hin qabu.
Walumaa gala wixinee labsii Wayyaanee kana irraa wanni hubatamu gaaffii Oromoo deebisuu fakkeessanii caasaa bulchiinsaa ofii Finfinnee keessatti diriirfachaa jiru. Diqaalota Tigree fi Habashaa afaan Oromoo dubbatanii fi OPDO keessaa kanneen isaaniif amanamoo ta’an bulchiinsa Finfinnee jalatti ijaaranii dantaa ofii tikfachuu fi umurii bittaa isaanii dheeraffachuuf dhama’aa jiru.
Oromoon naannoo biraatiin waa’een Finfinnee isin hin galchu jechuun Oromoota Finfinnee keessa jiraatan wajjin wal dura dhaabuuf abjuu hiika hin qabne abjootaa jiru Kanaaf Shira Isximaarummaa Tigrooti itti jiran kana wal geenyee diduu qabna. Oromoon keessaa fi alaan ka’ee dura dhaabbachuutu nu irraa eegama. Finfinneen seenaanis seeraanis, lafa Oromiya ti. Gaaffin Oromoo mootummaa Wauyyaanee jalatti deebii sirnaa fi qajeelaa argachuu danda’u tokku iyyuu hin jiraatu. Koloneeffataa irraa wanni gaariin eegamu tokko illee hin jiru. Kanaaf haa didnu.